Socdaalkii Farmaajo Ee Puntland Muxuu Ka Badalayaa Dagaalkii Qaboobaa Ee Dowladda Iyo Maamul Goboleedyada? – Shabakadda Amiirnuur
Socdaalkii Farmaajo Ee Puntland Muxuu Ka Badalayaa Dagaalkii Qaboobaa Ee Dowladda Iyo Maamul Goboleedyada?
January 15, 2018 7:36 am by admin Views: 273
Madaxweynaha DF ayaa dhowr maalmood ka hor booqasho ku tagay gobolada Wuqooyi bari ee uu ka taliyo maamulka Puntland wax yar uun kadib markii xilalka laga qaaday sadax wasiir Puntland-na la siiyay wasiirka arimaha dibadda.
Cabdi Wali Gaas ayaa juhdi iyo dhaqaale badan ku bixiyay soo dhaweynta Farmaajo si uu mucaaradkiisa siyaasadeed ugu muujiyo inuu heysto taageero waxaana la arkayay isagoo dhabta saaranaya caruur yar yar, laakin waxaa fiicnayd inuu is weydiin waxa ay ku kala duwan yihiin caruurtii Qalbi dhagax ee uu aabahood u dhiibay Itoobiya iyo kuwan uu ku beer laxawsanayo.
Dad badan oo u dhuun daloola siyaasadda ayaa aaminsanaa in socdaalkan uu soo af jari karo khilaafka dowladda kala dhaxeeya maamul goboleedyada laakin taa ma dhicin, oo kaliyana waxaa Farmaajo lagu mashquuliyay music, heso, alalaas iyo ciyaaro.
Kulamada gaar gaarka ah ee uu sameeyay waxaa ugu waqti dheeraa shir saxaafadda loo diiday oo uu magaalada Garowe kula qaatay safiirka Itoobiya u fadhiya Puntland lamana oga illaa iyo hadda wax ay ka wada hadleen.
Farmaajo wuxuu u muuqday nin aanan soo diyaarsan khudbadihiisa waxaana tusaale loo soo qaadan karayaa iyadoo xilliyada qaar loo toosinayay hadalada uu fagaarayaasha ka jeedinayo. Intaa waxa dheer inuu isku khaldayay degaanada iyo magacyada gobolada.
Iyadoo uu huwan yahay magaca ah “Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya” ayaa waxaa marar badna la arkayay iyadoo dhabarka laga istaajiyay calanka Puntalnd halkii ay ahayd in la keeno calanka Soomaaliya sida dastuurka ku qoran.
Madaxweynaha iyo Gaas waxaa ka dhaxeeyay khilaaf daran oo ku saleysan awooda oo waataan ogeyn in Cabdiwali Gaas ay maamulada u doorteen hogaamiyahooda, waa taan ogeyn in Gaas uu maamul goboleedyada ku xiray Imaaraadka Carabta, waa taan la soconay in uu Gaas Imaaraadka kasoo dhameeyay qandaraas lagu mucaarado Farmaajo oo dhaqaale lagu siiyay Cumar C/rashiid iyo C/raxmaan C/shakuur.
Haddaba madaxweynaha ayaa ku guul darreystay inuu xalliyo farqigaas weyn iyo culeyska dowladdiisa ka heysta mucaaradada ee uu aabaha u yahay C/wal Gaas, waxaana la is weydiin karayaa faa’iidada uu soo kordhiyay socdaalka Farmaajo oo aanan ka ahayn in loo hees heesay oo loo sacaba tumay?
Ugu dambeyntii dadka qaar ayaa socdaalka madaxweynaha ku micneeyay mid ka marqaati kacaya in dowladdu u kala eexatay mucaaradkeeda oo qaarna soo dhaweysatay qaarna dagaal hubeysan ku qaaday, waayo C/raxmaan C/shakuur waa la weeraray iyadoo la laayay ilaaladiisii, halka Gaas oo ah ninkii ugu horreeyay ee Imaaraadka la xirtay dowladdana ku diray maamul goboleedyada la booqday!